Miseensonni Makkalaakayaa Aanaa Miyootti lubbuu nama 5 galaafatan too'annaa jala oolfaman - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Miseensonni Makkalaakayaa Aanaa Miyootti lubbuu nama 5 galaafatan too’annaa jala oolfaman
Miseensonni Makkalaakayaa Aanaa Miyootti lubbuu nama 5 galaafatan too’annaa jala oolfaman
Miseensonni Makkalaakayaa torbee dabre godina Booranaa Aanaa Miyoo magaalaa Hiddii lolaatti, namoota cidha irra turan irratti dhukaasa banuun misirroota lamaan dabalatee nama 5 galaafatan too’annaa seeraa jala oolfamuu gabafame.
Miseensonni Raayyaa ittisa biyyaa too’annaa jala oolfaman kunniin ajajaa 10 fi ajajaa 50 tahuu gabaafame. Dhimmi isaanii akka aadaa naannichaatti akka ilaalamu kan gaafatame yoo tahu, manguddoon jaarsummaa guyyaa Arba’aatti kan beellamatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Aanaa Miyoo Boorana Oromiyaa
osoo namni badii dalagee hundi akkanati to’aanno seera jalaa oole lubbun ilmaan oromoo hanga ta’ee tokko du’arra nu qusatama turee, jaarsolin biyya addabbi cimaa ta’eefi kan garaa numadahee nufayyisuu irraatti nifudhatu jeenne abdanna. RNH galannii keessan RABBI BITA ULFAADHA
osoo namni badii dalagee hundi akkanati to’aanno seera jalaa oole lubbun ilmaan oromoo hanga ta’ee tokko du’arra nu qusatama turee, jaarsolin biyya addabbi cimaa ta’eefi kan garaa numadahee nufayyisuu irraatti nifudhatu jeenne abdanna. RNH galannii keessan RABBI BIRA ULFAADHA lubbu laammi darbitee RABBIN haamaruu taajirtu nuuf-haatissu
nuradin adishu says:
dhugaan hin qallatii Male hin cittuu jedhamami ree
Qasim Amano says:
makiyee edoo says:
dhugaan hin turtii male hin haaftuu
May 27, 2020 sa;aa 9:33 am Update tahe